စက်မှုဇုန်ပူလေကြောင်းများအတွက် centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover China Manufacturer
စက်မှု centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,စက်မှုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: စက်မှု centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,စက်မှုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > စက်မှုဇုန်ပူလေကြောင်းများအတွက် centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover
စက်မှုဇုန်ပူလေကြောင်းများအတွက် centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover
USD 1800 - 69500 / Bag/Bags
 စက်မှုဇုန်ပူလေကြောင်းများအတွက် centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover
အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခုခံအားအလိုက်အထိုက်နေတတ်, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးမှာသေးငယ်တဲ့သံမဏိစားသုံးမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးပြည်နယ်ဒါပေါ်ဧရိယာအဆင်ပြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းပစ္စုပ္ပန်မှာဖုန်မှုန့်မီးခိုးဆက်ဆံဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောဖိအားလေထုအိတ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသည်။ မြေမှုန့်စုဆောင်း၏သွေးခုန်နှုန်း controller ကို၎င်းမှုတ်အချိန်နှင့်ကြားကာလကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြုပြင်နိယာမမြေမှုန့်စုဆောင်းအပေါ်သွေးခုန်နှုန်း controller ကို၎င်းသွေးခုန်နှုန်းအရှည်နှင့်ကြားကာလ preset, မှန်မှန်အိတ်မှုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဆိုပါ solenoid valve များ၏စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုသွေးခုန်နှုန်း controller ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ solenoid valve များ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏အမိန့်လက်ဝဲကနေညာဘက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဖြောင့်ဘက်အခနျးတစျဆငျ့ 1. တစ်ဦးကိုထိရောက်စွာအထက်ပြာလက်စွပ်၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့်, ဒီဇိုင်းနှင့် plug ဖို့မလှယျကူဖြစ်ပါတယ်။
2. ဖြောင့်ပြွန်အနီးကန်တော့ချွန်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ပြာလက်စွပ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖယ်ရှားသောဒီဇိုင်းသည်ဒေသခံ wear အတွက်ကြမ်းမှုန်ဖုန်မှုန့်များ၏ပြန်တက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုရှောင်လျက်, ဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကျယ်ပြန့်သံမဏိ, အစားအစာ, ဆန့်ကျင်ဘက်, ပွန်းစားခြင်း, တွင်းထွက်ပစ္စည်း, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး
ဆိုင်ကလုန်း separator စက်မှုဇုန်မြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဇုန်မြေမှုန့် remover များအတွက်ဆိုင်ကလုန်း separator အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းမြေမှုန့်ဆိုင်ကလုန်းသဲ separator အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စက်မှု centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Filter ကိုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Pulse ဂျက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , သစ်သားဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Wood ကအဘို့အဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , multi ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး